Uri Kushanda neDomain Registrar kana Reseller? | Martech Zone
Wednesday, May 13, 2015 China, May 14, 2015 Douglas Karr
Pfungwa yemabhizimusi nekutya shefu
Sezvo isu tichishanda nevashambadziri zvakati wandei, ivo dzimwe nguva vanotikumbira kuti tiite mamwe mabasa kunze kweyakajairwa nesangano. Mumwe investor watinoshanda naye anotiroja isu nguva nenguva kubata kwavo domain kutenga. Izvo zvinoshanda nemazvo kuva nekambani yepamberi yekubata maitiro aya nekuti zvinowanzove zvishoma zvekutaurirana uye zvihombe zvemari zvichienda pakati pemapato.
Maitiro acho akatwasanuka kumberi. Isu tinoshandisa yechitatu bato escrow account iyo inosimbisa kuti takaisa mari kune rimwe bato uye tobva tapa mvumo kuburitswa kwemari patinowana muridzi wezita rezita. Kana chero mhando yekusabvumirana ikaitika, chibvumirano chinoenda mukureverera. Izvi zvinomisa mabhizimusi asina kutendeka kubva mukuitika.
Mavhiki mashoma apfuura, takataurirana nezvekutengwa kwenzvimbo kubva kune yakasarudzika pati. The domain was registered with Yahoo! Bhizinesi Diki… Kana saka takafunga.
Takaisa mari mu escrow ndokubva mafaro atanga. Isu takabatsira iro rimwe bato kuvhura iyo domeini uye nekupa mvumo kuchinjisa domain kune yedu mutengi's domain registrar. Aya maitiro akareruka kana iwe uchiziva zvauri kuita, zvinongotora nguva zvichienderana nerejista wedomain.
Ndakatarisa vese mutengi uye neyakavanzika mapato echirongwa maakaundi mangwanani akatevera uye hapana chaive chachinja. Mangwana acho ndakatarisa zvakare uye kuchinjiswa kwaive rakabviswa. Ndakafonera private party akati hapana zvaanga aita.
Ini ndakamisikidza musangano wemusangano tikadaidzira Yahoo! timu yekutsigira. Mushure mekumirira kwenguva yakati rebei, takasangana ne tech yekutsigira iyo yakati isu hatigone kuendesa dunhu kunze, asi dai ndiine Yahoo! Diki Bhizinesi account, isu tinogona kuendesa duraini kubva kuaccount kuenda kuaccount.
Kana iwe wakatenga kana kutengesa madomeni… nzeve dzako pamwe dzakangofungidzirwa pane izvi. Mushure mekoni yedhaini dhizaini kukakavara, Iōannes yakadzora maitiro aya kuona kuti iwe unokwanisa kuendesa maseru nyore nyore kubva kune mumwe mabharani kuenda kune mumwe. Izvi zvaiitirwa kuona kuti makambani ekunyoresa domain haakwanise kubata vatengi vawo.
Uyu ndiwo mubvunzo wandakabvunza kune yedu Yahoo! rutsigiro mumiriri asi aiita kunge asinganzwisise mamiriro emubvunzo saka takaramba tichienda. Apa ndipo painotanga kutyisa.
Ini ndakanyoresa Yahoo! Diki Bhizinesi account yemutengi wangu ndichiri parunhare neese wedu wechitatu bato uye Yahoo! mumiriri. Mumiriri akabva audza wechitatu kuti abvise account yake kuitira kuti domaini risunungurwe uye kuti ini ndikwanise kunyoresa domaini pakarepo kuti ndiitore.
Chii ?! Saka isu tichaenda kuisa ino dura kunze kwemusika kwemaminetsi mashoma uyezve ndokunyoresa zvakare ?! Ko kana isu tikarasikirwa neiyo duraini panguva iyoyo kune mumwe anopinza domainer kunze uko ne otomatiki nzira yekutenga ?! (Ini handizive kana izvo zviripo chaizvo, asi ini handina kukwanisa kutenda chikumbiro). Ini ndakabvunza mumiriri uye akandivimbisa kuti aizove nekutonga pamusoro penzvimbo iyi.
Saka isu takadhonza iyo inokonzeresa uye ini ndikanyoresa iyo domain mune yemutengi wangu nyowani Yahoo! Diki Bhizinesi account.
Zuva rakatevera, uye dura rakanga richiri muakaundi yechitatu bato uye rairatidza mune rangu asi risina kunyatso nyatso. Panguva ino, ndakaita ongororo uye a WHOIS kutarisa kuti uone ruzivo rweveruzhinji rwakabatana nedomain. Chokwadi chakati, iyo dura yakanga ichiri kunyoreswa neyechitatu bato. Asi heino chikamu chinoshamisa… iyo domain registrar yakanga isiri Yahoo! Bhizinesi Diki, zvaive Melbourne IT muAustralia.
Ini ndakaisa tikiti muMelbourne IT uye ivo vakanyora kumashure zuva rakatevera kuti ivo vaive ivo vechokwadi vanyoresa uye kuti Yahoo! Bhizinesi Diki vaingova vatengesi. Arghhhhhh! Nguva yese iyoyo yaive dongo.
Nekudaro, isu takatanga iyo domain yekuchinjisa maitiro kuMelbourne IT. Yakareba nyaya ipfupi, ivowo vane yakasanganiswa sisitimu uko iwe yausingakwanise kufambisa dura kubva kuaccount kuenda kune imwe. Iwe unongofambisa muridzi weakaundi kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe. Ini ndakaita izvozvi ndokubhadhara imwe muripo (ini handina zano rekuti ndakabhadhara chii kuYahoo! Bhizinesi Diki).
Pano isu tave nemavhiki mashoma gare gare uye ndinotenda isu tave neiyo domain pakupedzisira inoendeswa. Yangu yazvino chiziviso yakataura kuti zvinotora kusvika mazuva manomwe kuti apedziswe saka ushuwire isu rombo rakanaka!
Chinokosha apa ndechekuti iwe unofanirwa kutarisa kwaunenge uchinyoresa domain yako. Maitiro acho, kushomeka kwemagwaro, rutsigiro rwekusaziva uye kunyangwe maitiro ayo, ini ndinotenda, akatyora mirau yeICANN, zvaishungurudza nekuseka. Ini handina mubvunzo kuti maitiro acho aigona kuve akareruka zvakanyanya kana domeini raive rakanyoreswa kune munhu anonyoresa panzvimbo peye mutengesi.
Zvirinani zvakadaro, ingo namatira naGoDaddy. Kwete chete iwe unodzivirira idzi nyaya, iwe zvakare unoshandisa yakawanda shoma uye uwane rakakura vatengi.
Tags: tenga mazita echizindakutenga mazita emadunhuescrowmelbourne itmelbourne that domainYahooyahoo domain registraryahoo domains
May 14, 2015 pa 7: 54 AM
Ini ndichangotanga chirongwa apo ini ndiri kufambisa mutengi zvine hunyanzvi kure neYahoo diki bhizinesi kuenda kuna Godaddy, saka yakakwana nguva. Mubvunzo wangu ndinofanira kungorega kuyedza kupfuura Yahoo bhizinesi diki uye ndotaura neMelbourne IT? Zvakare, uchifungidzira kuti zvese zvinofamba mushe, zvinoita sekunge iwe unenge uine kutonga kuzere kwesizinda neMelbourne IT zvachose kunze kwemufananidzo? Kungoshamisika kana isu tichifanira kungosiya dura rakanyoreswa ipapo, pane kutora njodzi uye neimwe nguva neimwe nzira.
May 15, 2015 pa 12: 53 AM
Hi Jon, nokutendeseka chiitiko ichi chave chinotyisa (uye Melbourne's Domain interface haina kana kushanda muChannel), ini ndiri kunze uko. Domain iri kuendeswa (minwe yakayambuka) izvozvi.
May 17, 2015 pa 4: 52 PM
Kutenda nemhinduro Doug! Ndiri kutarisira kuvandudzwa pane izvi. Ini ndangoshanda chete nemumwe mutengi kuburikidza navo uye ini ndakasarudza kuvagarisa ipapo nekuda kwekuomerwa uku. Pachinhu chidiki, ndinovimba vanhu vanoona iyi blog positi uye vanosarudza kusavamba hwaro hwavo kuburikidza neYahoo bhizinesi diki. Ndiri mutendi akasimba mukupa varidzi vese vebhizinesi kugona kudzora zvavo zvinhu. Zvakawandisa nguva vanhu havatozive hunyanzvi hwekubatana nekambani inoita izvo zvinofanirwa kuve kudyara, kurasikirwa, pavanosarudza kutsvaga imwe kambani.
Kana ndiri ini, ndinoda izvi Ndiani zvimwe